Alloy forging mavhiri
Ese mavhiri akapasa bvunzo yekukanganisa, radial kuneta bvunzo, kukotama kuneta bvunzo, kusangana neJWL, VIA yemhando chitupa, (kusiri kwemunhu kukuvara) kuputsika kwehupenyu hwese waranti.
Ndeupi mukana wemavhiri alloy akagadzirwa naMax Auto
1. Huremu huremu, huremu hunenge 1/2 hwemavhiri esimbi akajairwa, anoita kuti mota ikurumidze.
2. Deredza kupera uye kubvaruka, dzikisa kukuvadzwa kwevhiri hub panguva yekubhureki, uye kuderedza mutengo wekugadzirisa webhureki system.
3. Kuderedza kushandiswa kwemafuta, kuchengetedza mafuta, kuderedza kumira kwevhiri, nokudaro kuderedza kushandiswa kwemafuta. Inertial kuramba idiki, iyo inobatsira kuvandudza yakatwasuka-mutsara wekutyaira kuita kwemotokari
4. Haisi nyore kuita ngura. Iyo alloy vhiri inogadzirwa nealuminium sechinhu chakakosha, uye yakagadzirwa nemanganese, magnesium, chromium, titanium nezvimwe zvinhu. Kuenzaniswa nevhiri resimbi, ine maitiro ekuchengetedza simba, kuchengetedza uye kunyaradza.
5. Kupisa kwakanaka kunopisa. Iyo yekupisa conductivity yealloy zvinhu inenge 3 nguva yesimbi. Iko kupisa kwekupisa kuita kwakanaka. Iko kupisa kwekupisa kunogona kuita rimwe basa mune braking system yemotokari.
6. Mafashoni maitiro, simba rekugadzira rakasimba, zviuru zvezviumbwa zvekusarudza kwako
7. Hupenyu hurefu hwebasa, iyo aruminiyamu alloy yakagadziriswa kupisa kuti iwedzere simba, ine yakanaka plastiki uye yakanyanya kusimba kusimba.
8. Kupikisa kwepamusoro, kukwanisa kuenderana nemhando dzakasiyana-siyana dzekutyaira
usati wagadzirisa vhiri, ndapota simbisa kana iyo screw hole data yevhiri inoenderana nemotokari, uye wozoisa vhiri mushure mekusimbisa kuti screw hole data ndeyechokwadi.
Zvakapfuura: 2039810020 Auto Parts Shock Absorber Bearing yeBENZC
Zvinotevera: CDW/ERW/Kutonhora-yakakungurutswa precision isina musono chubhu
Mota Alloy Wheels
China Alloy Wheel Factory
Yakagadzirwa Aluminium Wheel